ऊर्जामन्त्री रायमाझी कि काफ्ले ? | Capital Khabar ::
गृह छापाबाट ऊर्जामन्त्री रायमाझी कि काफ्ले ?
ऊर्जामन्त्री रायमाझी कि काफ्ले ?
काठमाडौं, फागुन १८ – ऊर्जामन्त्री भएको दुई महिनासम्म भेट्न समेत नदिए पनि पछिल्ला दिनमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बीच सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको छ ।
मन्त्री भएपछि काफ्लेप्रति संकेत गर्दै ऊर्जामन्त्री रायमाझीले प्राधिकरणको दुर्गन्ध हटाउने भाषण समेत गरेका थिए । तर प्राधिकरणको दुर्गन्ध हटाउने डिङ हाँक्ने तिनै रायमाझीले २ महिनापछि ९० डिग्री परिवर्तन भएर काफ्लेलाई प्राधिकरणको सुगन्धको रुपमा देख्न थालेका छन् ।
दुई महिनासम्म भेट नदिने तहमा पुगेका मन्त्री रायमाझी अहिले प्राधिकरणको कर्मचारी जस्ता र काफ्ले मन्त्री जस्तै भएका छन् । मन्त्री रायमाझीलाई प्रभावमा पारेर सम्बन्ध विकास गरेपछि काफ्ले आफ्ना निकटहरुसँग थोरै रकममा उनलाई किन्न सकेकोमा मख्ख पर्ने गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले प्राधिकरणका महत्वपूर्ण र कमिसन धेरै आउने काम यो सरकारका पालामा होइन, अर्को सरकारका पालामा गर्ने भन्दै फाइल वेट गराएका छन् ।
काफ्लेले जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धकहरुलाई सिधै भन्ने गरेका छन्, यो सरकार कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म मात्र हो, एक महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, सबै काम त्यतिबेला गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई भने पनि काम गर्ने म हो, म बोर्डमा प्रस्ताव लान्न भन्दै महत्वपूर्ण फाइल होल्ड गर्दैआएका छन् । प्राधिकरणबाट हुने सजिला र धेरै कमिसन आउने काम आफैं सुटुक्क गर्ने र विवादमा पर्ने किसिमका फाइल मात्र मन्त्रीसम्म लाने गरेको आरोप पनि काफ्लेमाथि लाग्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत बर्ष १६ सय कर्मचारी मागेर सूचना निकालेको र भदौमा लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता सकेका कर्मचारीको नतिजा ननिकाली पुन: ५ सय १ जना कर्मचारी आवश्यक भएको सूचना निकालेको छ । प्राधिकरणले १६ सय कर्मचारीको नतिजा ननिकाली पोको पारेर ऊर्जामन्त्री रायमाझी र काफ्लेले नयाँ कर्मचारीका लागि सूचना निकालेको स्रोतले बताएको छ । पहिलाको सूचना अनुसारको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि मात्र नयाँ सूचना निकाल्नुपर्नेमा कर्मचारी भर्तिमा समेत आर्थिक लेनदेनका लागि सूचना निकालिएको छ । कथित खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवविरुद्ध ट्रान्सफर्मर भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि अदालतमा मुद्दा दिएर दोस्रो नम्बरका काफ्ले कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् । दोस्रो नम्बरका प्रतिस्पर्धीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रचलन विश्वमै अनौठो भएको टिकाटिप्पणी काफ्लेलाई एमडी बनाउने क्रममा भएको थियो ।
अदालतको आदेशका आधारमा एमडी भएका काफ्लेलाई सुशील कोइराला सरकारको अन्तिम समयमा ऊर्जा मन्त्रालय तानिएको थियो ।
राधा ज्ञवालीलाई ऊर्जामन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर वामदेव गौतमले सम्हालेको समयमा उनी मन्त्रालय तानिएका थिए । मन्त्रालय तानिएपछि उनी पुन: मुद्दा दिएर अदालतको आदेशमा प्राधिकरणमा फिर्ता भएका हुन् । उनले मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशका आफन्त बीचौलियालाई चेक दिएका थिए । तर बीचौलियाले चेक साट्न जाँदा चेक बाउन्स भएको स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।
मुद्दा जितेर काफ्लेले ५ महिना प्राधिकरणमा बिताइसक्दा पनि चेक नसाटिएपछि ती बीचौलिया तनावमा परेका छन् । काफ्लेले मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै दररेट तोकेर प्राधिकरणमा विनियम विपरीत सरुवा गरेका छन् । मन्त्री रायमाझीलाई ५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भन्दै बरिष्ट कर्मचारी प्रमुख हुने ठाउँमा कनिष्टलाई सरुवा गरिएको छ । ९ तहको प्रमुख हुनुपर्ने कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले ७ तहको कर्मचारीलाई सरुवा गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीको आज्ञा भन्दै उनले ब्यापक कर्मचारी सरुवा गरेका छन् । सरुवामा तहअनुसार घुस असुली गरिएको छ । विनियमावली उल्लंघन गर्दै सरुवा भएको छ ।
मन्त्री रायमाझीले पार्टीको नीति विपरीत भतिजा आलोक रायमाझीलाई स्वकीय सचिव राखेका छन् ।
पार्टीका कार्यकर्ताले भेट्न खोज्दा वा फोन गर्दा आलोकले मन्त्री ब्यस्त भएको भन्दै भेट नदिने ब्यापारीलाई तुरुन्त भेट गराउने गरेको आरोप छ ।
आजको दृष्टि साप्ताहिकमा यो खबर प्रकाशित छ |
अघिल्लो लेखमानौ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक बस्नेत सहित सातविरुद्ध मुद्दा
अर्को लेखमाकानुनी मापदण्डबिनै दाहाललाई चालकसहित विलाशी गाडी
सरकारको मुख्य सचिवमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीे नियुक्त
मुग्लिन–नारायणगढ सडक डेढ महिना बन्द गर्न निर्देशन